Apple nanampy sary vaovao 16 ho an'ny Apple TV | Vaovao IPhone
Ny kinova beta farany navoaka ho an'ny Apple TVs, izay amin'ity tranga ity dia ny kinova 15.1 manampy fahagagana amin'ny endrika haingon-tsary na screensavers. Manodidina ny 16 ny toerana vaovao azo zahana raha mbola tsy nahazo fifandraisana avy amin'ny mpampiasa nandritra ny fotoana kelikely ilay fitaovana.
Amin'ity tranga ity ny tonian-dahatsoratra malaza 9To5Mac, Benjamin Mey, mamoaka amin'ny tranokalany tsirairay avy amin'ireo horonantsary vaovao ireo izay azo jerena ho toy ny screensaver amin'ny fahitalavitra noho ny Apple TV. Mba hizaha toetra sy hijerena antsipirihany ireo tontolony vaovao ireo dia tsy maintsy apetraka ao anaty boaty ambony napetraka ny kinova beta farany ary ampidino avy amin'ny Fikirana> General> Screensaver.
Mahatalanjona hatrany ny endrika vaovao
Ireo sary izay izy ireo dia afaka jerena amin'ny endrika horonantsary tena mahavariana ary amin'ny tranokala Mey dia samy nanafatra tsara ny tsirairay amin'izy ireo izahay mba ho afaka mankafy azy ireo na dia tsy manana ny kinova beta napetraka ao amin'ny Apple TV aza izahay. Afaka mahita biby toy ny feso ianao na barracudas ary koa ny sary mahafinaritra an'i Patagonia, Afrika, Aostralia, Karaiba ary maro hafa.
Marina fa ny zava-baovao ampiharina ao amin'ny Apple TV dia somary ara-drariny amin'ireo kinova vaovao, mihoatra ny fanamboarana bibikely mahazatra sy ny fanatsarana ny fitoniana mahita fiovana kely isika. Izany no mahatonga ireo antsipiriany ireo, na dia amin'ny endrika screensaver aza, dia ankasitrahana tokoa, manaitra ihany koa izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Apple nanampy sary vaovao 16 ho an'ny Apple TV
Ny daty fandefasana mini IPad dia nifindra hatramin'ny faran'ny volana oktobra tamin'ny voalohan'ny volana novambra